အရောင်များနမူနာကတ် Winder စက်၏ FH-25 ချည်ခင်ကျယ်ပြန့် - အရောင်များနမူနာကတ် Winder စက်ပေးသွင်း၏တရုတ် FH-25 ချည်ခင်ကျယ်ပြန့်,စက်ရုံ -FEIHU
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် >ကုန်ပစ္စည်း >စက်အကွေ့အကောက်များသော COLOR ကဒ်
အရောင်များနမူနာကတ် Winder စက်၏ FH-25 ချည်ခင်ကျယ်ပြန့်
FH-25 ချည်ခင်အရောင်နမူနာ Card ကိုအကွေ့အကောက်များသောစက်
FH-25 ကြိုးနမူနာအကွေ့အကောက်များသောစက်ကြေးဝါနှင့်ဝါယာကြိုးတစ်အရေအတွက်သက်ဆိုင်, ကြိုး, အရေအတွက်နှင့်အတူ type ကိုအကွေ့အကောက်များသောအပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစဉ်, ဘောင်း, ကြိုးအသုံးပြုသူ optional ကိုအရောင်များအတွက်, contrast နဲ့စမ်းသပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်များ. နမူနာကဒ်များကိုအမျိုးမျိုးပေးဖို့ဒီဇိုင်းတဲ့ professional ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်ပါတယ်.
အရောင် Card ကိုအကွေ့အကောက်များသောစက်
220V ကို 50HZ
တစ်ဦးက: website တွင်ငါ့ထံသို့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သို့ပေးပို့သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ကျနော်တို့ chat ကျေးဇူးပြု.. ငါ"သင်သည်သင်၏အသေးစိတ်လိုအပ်သောပေးပို့နိုင်ပါတယ်လျှင်တန်ဖိုးထားd.
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်တော်စက်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအကွေ့အကောက်များသောကြွယ်ဝအတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းရှိ. သင့်ရဲ့လိုအပ်သည့်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာစက်ဒီဇိုင်းပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုရေးဆွဲပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ကျွန်တော်စက်ကအတိုင်းလိုက်နာစေနိုင်သည်.
လွန်ခဲ့သော : FH-25 New Simple လွယ်ကူချည်ခင် COLOR ကဒ် machine Operate
နောက်တစ်ခု : စက်အကွေ့အကောက်များသောချည်ခင်အရောင် Card ကို